कोरोना भाइरस महामारीः खाद्यपदार्थ राखेको खोलबाट सङ्क्रमण सर्ने खतरा कति? – News Nepal
कोरोना भाइरस महामारीः खाद्यपदार्थ राखेको खोलबाट सङ्क्रमण सर्ने खतरा कति?
“भाइरस भएका कुनै सामान वा भुइँ छुँदा त्यसबाट मानिसलाई कोभिड-१९ सर्ने सम्भावना छ,” अमेरिकी स्वास्थ्य निकाय सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोलले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ। तर उसले थपेको छ, “भाइरस फैलिने मुख्य तरिका नै यही हो भन्ने चाहिँ ठानिँदैन।”
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार खानेकुरा वा प्याक गरिएको खानेकुराबाट अहिले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण भएको कुनै पुष्टि भएको छैन।
तर सङ्क्रमणबाट जोगिन केही उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ।